Mpanamboatra teko vy - Mpanamboatra paompy vy i Sina
teko vy natsipy Anisan'ireo setran'ny dite misy enamel, fotsy, marefo ary mamirapiratra, dia azo ampitahaina amin'ny vatan-kazo porselana; voaravaka volom-borona na harato miloko, ary mazava ny haavony, amin'ny fahatsapana kanto misimisy kokoa; fomba maivana, endrika tsy manam-paharoa ny kaopy dite miendrika amponga ary kaopy dite miendrika lolo; dia afaka mitana andraikitra amin'ny fitehirizana ny hafanana, ary mora entina, ary azo ampiasaina hametrahana teôpôla, famonoana teacup misy takelaka dite vita amin'ny dite, ataon'ny olona dite maro. Na izany aza, ny dite enamel dia mametraka fas hafanana ...
teapot vy dia tamin'ny ankapobeny tamin'ny tarana-mpanjaka Yuan, nanomboka niitatra tany Sina ny teknolojia enamel. Ny setran'ny dite misy enamel an'i cloisonne dia noforonina tamin'ny vanim-potoana Jingtai tamin'ny Ming Ming (1450-456), izay azo antsoina hoe "asa-tanana vita amin'ny enamel". Nandritra ny fanjakan'ny Emperora Qianlong an'ny Dinasti Qing (1736-1795), nanomboka niparitaka avy tao amin'ny lapan'ny emperora ho an'ny vahoaka ny enamel an'i cloisonne. Azo lazaina fa io no fiantombohan'ny orinasan-tsolika ao Shina. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, enamel t ...
Ny teko vy dia nanisy enamel ny 1800ML Tamin'ny vanim-potoana Yuan dia nanomboka niparitaka tany Sina ny teknolojia enamel. Ny setran'ny dite misy enamel an'i cloisonne dia noforonina tamin'ny vanim-potoana Jingtai tamin'ny Ming Ming (1450-456), izay azo antsoina hoe "asa-tanana vita amin'ny enamel". Nandritra ny fanjakan'ny Emperora Qianlong an'ny Dinasti Qing (1736-1795), nanomboka niparitaka avy tao amin'ny lapan'ny emperora ho an'ny vahoaka ny enamel an'i cloisonne. Azo lazaina fa io no fiantombohan'ny orinasan-tsolika ao Shina. Tany am-piandohan'ny taona 20 ...
Teapot vy nesorina enameled 1800ML Egyptie taloha no niandohan'ny enamel, ary nampidirina taty Eropa. Ny enamel vy vy be mpampiasa ankehitriny dia avy tany Alemana sy i Aotrisy tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19. Tamin'ny taona Dynasty Yuan dia nanomboka niitatra tany Sina ny teknolojia enamel. Ny setran'ny dite misy enamel an'i cloisonne dia noforonina tamin'ny vanim-potoana Jingtai tamin'ny Ming Ming (1450-456), izay azo antsoina hoe "asa-tanana vita amin'ny enamel". Nandritra ny fanjakan'ny Emperora Qianlong avy amin'ny tarana Qing (173 ...
Ny teko vy dia nopetahana 800ML Egyptie taloha no niavian'ny enamel, ary avy eo nampidirina tany Eropa. Ny enamel vy vy be mpampiasa ankehitriny dia avy tany Alemana sy i Aotrisy tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19. Tamin'ny taona Dynasty Yuan dia nanomboka niitatra tany Sina ny teknolojia enamel. Ny setran'ny dite misy enamel an'i cloisonne dia noforonina tamin'ny vanim-potoana Jingtai tamin'ny Ming Ming (1450-456), izay azo antsoina hoe "asa-tanana vita amin'ny enamel". Nandritra ny fanjakan'ny Emperora Qianlong avy amin'ny tarana-mpanjaka Qing (1736 ...
Teapot vy nitafy 500ML